Home बिचार आर्थिक सुशासनलाई कमजोर हुन नदेऊ
पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति नपाए मात्र सरकारले खोजेको सुशासन र संमृद्धि सम्भव देखिन्छ
‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने वर्तमान सरकारको मुख्य नारा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सजग गराएको पनि भन्थे । तथापि भ्रष्टाचार बढेको फेहरिस्त आइरहेका छन् । सानातिनादेखि ठूलाठूला विषयमा पनि अनियमितता, कैफियत देखिँदै छ । दैवी विपत्तिमा समेत दातृसंस्थाले दिएको रकम कुम्लाउने प्रवृत्ति छ । भूकम्पमा जस्तापातामा समेत आँखा गाडेका नेताहरू कोरोनाजस्तो विश्वमहामारीका बेलासमेत आर्थिक सुशासनमा सचेतदेखि सकेका छैनन । आर्थिक प्रलोभनकै आरोपमा मन्त्रीले राजीनामा दिएका पनि हुन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक अनियमितताका बारेमा बारम्बार चर्चा चलेकै हो । तर, पनि किन कम हुँदैन भ्रष्टाचार ? किन देखिन्छ यत्रतत्र भ्रष्टाचार ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो र सरकारका लागि थप चुनौती पनि ।
ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन
गत साता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकासित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२० को अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । एसियाका १७ प्रतिनिधिमूलक देशलाई लिएर प्रत्येक देशका विभिन्न पृष्ठभूमिका १ हजार मानिसलाई समावेश गरी गरिएको मत सर्वेक्षणका आधारमा प्राप्त नतिजालाई प्रतिशतमा लगी सार्वजनिक गरिएको छ । यद्यपि उक्त संस्था र प्राप्त नतिजाको आधिकारिकतामाथि भने प्रश्नचिह्न खडा नै छ । विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न सिर्जना भइरहेको छ तर पनि सांकेतिक रूपमा भने उक्त नतिजाले नेपालमा आर्थिक अनियमितताको स्थिति देखाउँछ र यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
विगत तीन वर्षदेखि हामीकहाँ जनताबाट निर्वाचित पूर्ण बहुमतको स्थिर र बलियो एकमना सरकार छ । सरकारले सुशासनका सवालमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता  नीति अख्तियार गर्ने भनेको पनि छ । तर सरकारी नीति र काम गर्ने तरिकाबीच कतै पनि साइनु देखिँदैन । १ हजारमध्ये ५८ प्रतिशत सहभागीले उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक सुशासनतर्फ जनताको निराशा बोलेका छन् ।
राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा आम नेपालीले बुुझेका छन्
ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ भन्छ– मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । एसियाका १७ देशमाथि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भ्रष्टचार धेरै बढेको देखिन्छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा अब मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील हुनुपर्ने सबै संवैधानिकलगायतका अन्य निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको मात्रा नभएर भ्रष्टाचार भए/नभएको अनुभूति आम जनतामा कस्तो छ भन्ने मापन गरेको मात्रै हो । यसले जनताको निराशाको अवस्थालाई देखाउँछ । योे नतिजालाई सरकार र सम्बन्धित सबैले जनताको ऐनामा आफ्नो तस्बिर हेरेको महसुस गर्नैपर्छ विभिन्न काण्डमा जनताको विमति उक्त प्रतिवेदनमा ओकलिएको हुनुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा सच्चिनका लागि यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा अनियमितताका शृंखलाहरू कम भई भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरू बढ्नुपर्छ । पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । अनि मात्र सरकारले खोजेको सुशासन र समृद्धि सम्भव देखिन्छ ।
उक्त संस्थाको सर्वेक्षणले नेपाललाई थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पनि पछ्याएका छन् । भारत भने यस मामलामा छैटौं स्थानमा छ । त्यहाँका ४७ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेको कुरा प्रतिवेदनले बोल्दछ । कम्बोडियामा भने १२ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन्  । १७ देशमध्ये यो सबैभन्दा कम प्रतिशत हो । १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । यस हिसाबले नेपालीहरूले औसतभन्दा निकै बढी संख्याले यस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ । ८४ प्रतिशत नेपालीहरूले सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या देखेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा आम नेपालीले बुुझेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूमध्ये, १२ प्रतिशतले पछिल्लो वर्ष कुनै न कुनै घुस खुवाएका छन्, २९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवाका लागि पहुँचको दुरुपयोग गरेका छन् ।
अख्तियारद्वारा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिए । आयोगले ४ सय ५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो चित्रले मुलुक कतिसम्म आर्थिक सुशासनमा कमजोर सावित हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ
अध्ययनमा सहभागीमध्ये धेरैजसोले सरकार सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र कर्मचारीलाई दोष दिएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्दा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै हिँडेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्तो प्रवृत्ति झांगिएको आम धारणा छ ।
अहिले देशमा स्थिरता छ । अस्थिरता भएकाले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्न पाइँदैन । स्थिरतासँगै सबै बेथिति हट्ने र सुशासन कायम हुने जनताको आकांक्षा थियो । तर खै, किन पूरा हुन सकेनन ती आकांक्षा ? सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । यो बेला आम नागरिकले सकारात्मक परिवर्तन अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, एकमना सरकार प्रतिपक्षसँग भन्दा आफ्नै दलकासँग डराउनुपर्ने भएको छ । आफ्नै दलभित्रका प्रतिपक्ष सरकारका लागि शोभनीय हुँदैन । तर, अवस्था त्यस्तै छ  । त्यसैले, मुलुकको लोकतन्त्र र सुशासनप्रति चिन्ता गर्ने हो भने यो अध्ययनको नतिजालाई मनन गर्दै अगामी दिनमा भ्रष्टाचारप्रति आम धारणा बदल्ने प्रण सम्बन्धित सबैले गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाउनैपर्दछ ।
मुद्दा र प्रतिवेदनमा सामीप्य
अख्तियारद्वारा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिए । आयोगले ४ सय ५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो चित्रले मुलुक कतिसम्म आर्थिक सुशासनमा कमजोर सावित हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । उक्त संस्थाको प्रतिवेदनमा आम जनताको भनाइ र अख्तियारको कारबाहीबीच सामीप्य देखिन्छ । यो घटनाबाट सरकार र सरकारसम्बद्ध निकायले पाठ सिक्नैपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको ठहरसहित हालै संघीय मामिला मन्त्रालयले ती तहका कार्यालय प्रमुख खटाउँदा बेरुजुकम गर्ने र भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता गरेर मात्र खटाउने तयारी गरेको छ । यो देखाउने दाँत मात्र हो । कसैले पनि म भ्रष्टाचार गर्छु भनेर गर्ने होइन न त गर्दिनँ भन्दैमा नगर्ने हो । यो एक किसिमको आदत हो । भ्रष्टाचार गर्नेउपर कडा कानुन र शून्य सहनशीलता अवलम्बन नगरेसम्म कमी आउने देखिँदैन । यसका लागि सरकार कठोर, निर्दयी र कडा हुनुपर्छ ।
अर्को सामीप्य बेरुजुसँग
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ६ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखाएको छ । यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै २१ प्रतिशत हो । आर्थिक सूचांकका हिसाबले यो शुुभ संकेत होइन । बेरुजु नाम दिइए पनि यो गर्नुुपर्ने काममा नियमित रूपमा खर्च नगरिएको, नगर्नुुपर्ने कामका लागि अनियमित तवरले खर्च गरिएको हुँदा प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारकै अर्को शृंज्ञखला हो । यो दृष्टान्तले पनि आम नागरिकले व्यक्त गरेको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसबाट पनि सरकारको सुशासन र भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी अभियान कमजोर साबित हुन्छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीको बाचा पूरा त भएन नै, आउँदो पुस्ताका लागि पनि गलत सन्देश प्रवाह हुने भयो । यो प्रवृत्तिलाइ बेलैमा रोक्न नसक्ने हो भने भावी दिन भयावह बन्ने निश्चित छ । यहाँ चिन्ता बूढी मरेकोमा भन्दा पनि काल पल्किएकोमा गर्नुुपर्ने देखियो ।
अनियमित खर्च गर्नेमा स्थानीय तहहरू बढी देखिएका छन् । २०७५/७६को लेखापरीक्षणमा ४ सय ४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । बेरुजुमध्ये पनि प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ ।
यसै पनि ती तहमा काम गर्ने प्राविधिकदेखि वडाध्यक्षहरूसमेत अख्तियारको घेरामा परिसकेका छन् । कैयांै पालिकाहरूको मोह सवारी साधनमा गएको देखिन्छ । केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूले नीति तथा कार्यक्रम/वार्षिक बजेट पेश गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । बिनादरबन्दीमा निजी सचिवहरू राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारी साधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिविना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितताहरू यी पालिकाहरूमा पाइएका बेरुजुहरू हुन् । बेरुजुका प्रकृति हेर्दा यी घटना आर्थिक अनियमितताका उदाहरण मात्र नभएर स्थानीय तहलाई असफलतातिर लैजाने पूर्वसंकेत समेत हुन । यस्ता विकृतिहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक नेतृत्वले सुुझाउन नसक्दाका परिणाम हुन । आम नागरिकहरू यी सबै कुराबाट परिचित भएरै नकारात्मक प्रतिवेदन देखिएको छ । यसलाई मनन गरी सरकार बेलैमा सच्चिन जरुरी छ ।
प्रदेश ३ सत्यन श्रेष्ठ - January 13, 2021 0
खोलामा हाम फाल्दा युवकको मृत्यु
राकेश प्रसाद गुप्ता - August 8, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीको परवानिपुरमा एक युवकले खोलामा हाम फाल्दा डुबेर मृत्यु भएको छ । पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत लालबन्दी नगरपालिकाको उतरीक्षेत्र पर्ने वडा नम्बर...
प्रशान्त वली - April 21, 2020 0
काठमाडौं । निजी तथा सरकारी अस्पतालले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज तरिकाले प्रवाह नगर्दा विभिन्न रोगले प्रताडित बिरामी थप जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको...
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,आज सिङ्गो मानवजाति कोभिड १९ को महामारी विरुद्ध कठिन युद्ध लडिरहेको छ । तपाईंहरुलाई संवोधन गर्न उभिएको यस घडीसम्म...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - September 23, 2020 0
अर्थ राजधानी समाचारदाता - October 16, 2020 0
काठमाडौं । स्वस्थ खानाको महत्व विशेष हुन्छ । विहान बेलुकीको भागदौडको शहरी जीवनशैलीलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न स्वस्थ तथा स्वच्छ खानपान गर्नु अपरिहार्य छ...
Not-to-be-missed डब्बु क्षत्री - June 8, 2020 0
Exclusive एजेन्सी - January 10, 2021 0
सत्यन श्रेष्ठ - January 11, 2021